Khadar oo kulan xasaasi ahla qaatay khubaro xagga dhaqaalaha ah | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Khadar oo kulan xasaasi ahla qaatay khubaro xagga dhaqaalaha ah
Khadar oo kulan xasaasi ahla qaatay khubaro xagga dhaqaalaha ah
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna siihayaha xilka Ra’iisal wasaaraha dalka Md. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta Wasaaradda maaalityadda iyo Khubaro xagga dhaqaalaha ah.
Intii uu kulanka socady ayay mas’uuliyiinta ka wada hadleen sida loo horumarin karo nidaamka maamulka maaliyadda dalka iyo dowlad wanaagga.
“Waxaan maanta warbixin ku saabsan xaaladda dib u habeynta dhinaca dhaqaalaha ee dalka ka dhageystay wasiirrada ku shaqada leh iyo khubaro. Waxaan si aad ah uga shaqeyneynaa xoojinta dhaqaaleheenna, horumarinta nidaamka maamulka maaliyadda ee qaranka iyo dowlad wanaagga. Waxaa naga go’an in aan xaqiijinno guul dhaqaale iyo maaliyadeed oo dalkeennu gaaro. ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed”.
Maqaal horeCiidmada ammaanka Jowhar oo Gacanta ku dhigay Aabbe Wiilkiisa dilay
Maqaal XigaSawirro Maamulka gobolka Sh/Hoose oo deeq raashin ka qeybiyey duleedka Marka